SF Burmese Community Organizers & Friends – အခမဲ့ သွားနဲ့ ခံတွင်းကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေး | MoeMaKa Burmese News & Media
SFBC Organizers & Friends, မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၃
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄က ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ အရှေ့ဘက်ကမ်း၊ Dixon Landing Family Dental ဆေးခန်းတွင် စေတနာရှင်သွားဆရာဝန် ၂ ဦးဖြစ်သော ဒေါက်တာမောင်မောင်သော်နှင့် ဒေါက်တာလှမြိုင်တို့က သွားကျန်းမာရေးအကူအညီလိုအပ်နေသူ မြန်မာလူနာ ၁၉ ဦးအား အခမဲ့ သွားကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေးပြီး ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကုသမှုများ ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျန်းမာရေးလှုပ်ရှားမှုကို ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာရှိ မြန်မာစေတနာရှင်လုပ်အားပေးများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော San Francisco Burmese Community Organizers နှင့် မိတ်ဆွေများက ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
အဓိကအားဖြင့် အကူအညီလိုအပ်နေသူများမှာ ကျောင်းသားလူငယ်များ၊ အသက်အရွယ်ကြီးသည့် လူကြီးများ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ကျန်းမာရေးအာမခံစာရိတ်ကြီးမားသော ဒေသများတွင် နေထိုင်သူများအတွက် သွားကျန်းမာရေးအာမခံကို ၀ယ်ယူရန် အခက်အခဲရှိသူများ၊ စောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်နေသူများ၊ ဘာသာစကားအခက်အခဲရှိသူများအတွက် ယခုလို မြန်မာဆရာဝန်များက မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်းရှိ လူကြီး၊ လူငယ်များအတွက် စေတနာဝန်ထမ်း ဆေးကုသမှု ဒါနပြုသည့်အတွက် လူနာများနှင့် မိသားစုဝင်များက ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
“သာမန်အားဖြင့် ကိုယ်ခန္တာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအာမခံ ရှိကြတယ်၊ မရှိတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။ သွားတို့ မျက်စိတို့ကတော့ ယေဘူယျ health insurance ရဲ့အပြင် သီးသန့် ၀ယ်ယူရတာမျိးဖြစ်တယ်။ ယေဘူယျကျန်းမာရေးအာမခံက တနှစ်တခါ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ပေးတယ်။ နေမကောင်းရင် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းပြနိုင်တယ်။ ဆေးဝါး ကုသမှုတွေ ရယူနိုင်တယ်။ သွားကျတော့လည်း ၁ နှစ် တခါ၊ ၂ခါ လောက် စစ်ဆေးတာ၊ ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်တာ၊ ကုသမှု ခံယူတာတွေ လုပ်ရတယ်။ မျက်စိလည်း သူ့အတွက် အာမခံဝယ်ထားရင် ဆရာဝန်ဆီမှာ ပုံမှန်စစ်ဆေးတာ၊ သင့်တော်တဲ့ကုသမှု ခံယူတာ လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သွားကျန်းမာရေးကတော့ သာမန်အားဖြင့် မပြမဖြစ် အရမ်းဆိုးမှပဲ ဆရာဝန်ဆီ ရောက်တာများတယ်။ အဲသည်တော့ ကာကွယ်တဲ့အဆင့်ကိုကျော်ပြီး ကုသရတဲ့အဆင့်ဆိုတော့ လူနာတွေအတွက် မသက်သာဘူးပေါ့”
ဟု စေတနာဝန်ထမ်း လုပ်အားပေးသူတဦးက ၎င်း၏ အမြင်ကို ပြောပြပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ သွားကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခြင်းနှင့် ကုသမှုပေးရာတွင် သွားနှင့် သွားဖုံးများအား ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊ သွားနှင့် သွားဖုံး သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ လိုအပ်ပါက သွားနှုတ်ပေးခြင်းတို့ အားလုံးကို အခမဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ချို့ယွင်းနေသော သွားများ ဖာထေးခြင်း၊ သွားစိုက်ခြင်းနှင့် အရေးကြီးသည့် ကုသမှုတို့ကိုမူ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း၊ သို့သော်လည်း အဆိုပါအခြေအနေများကို လူနာများအား ရှင်းပြခြင်း၊ ကုန်ကျစာရိတ်များကို ခန့်မှန်းပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
“အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်သွားတွေ အခြေအနေကို အမှန်အတိုင်းသိသွားရတယ်။ နောက်ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်ရမှာတွေကိုလည်း နားလည်သွားတယ်။ ချင့်ချိန်လို့လည်း ရတယ်။ ဆရာတွေနဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ရှင်းပြတော့ ကိုယ်မတတ်နိုင်ရင်တောင်မှ ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရတယ်။ သည်နိုင်ငံမှာ မလုပ်ဖြစ်လည်း မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး လုပ်ချင်လည်း လုပ်ရမှာပေါ့”
ဟု လူနာတဦးက ၎င်းအမြင်ကို ရှင်းပြသည်။
လုပ်အားပေးများက ဆရာဝန်များ ညွှန်ကြားသည့် ဝေယျာဝစ္စအလုပ်များလုပ်ကိုင်ပေးခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ လူနာများ မိသားစုများနှင့် စကားလက်ဆုံ ပြောဆိုနိုင်ကြသဖြင့် ကွန်မြူနီတီအတွင်း အချင်းချင်း ရင်းနှီးမှု၊ နားလည်မှုများကိုပါ တည်ဆောက်နိုင်သည်ကို တွေ့ရသည်။
” မြန်မာဆရာဝန်တွေ အများအပြားကလည်း ကုသိုယ်ဖြစ် စောင့်ရှောက်မှု ပေးချင်တယ်။ မြန်မာမိသားစုတွေထဲမှာ လိုအပ်နေသူတွေလည်း ရှိတယ်။ အခုလိုမျိး တယောက်တလက် တပိုင်တနိုင် ကူညီကြရင် သည်နေရာမှာမှမဟုတ်ဘူး၊ အခြားနေရာတွေ၊ ဆေးခန်းတွေမှာလည်း အခုလို ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုး ပြနိုင်တာပေါ့။ နောက်ပြီး နောက်ထပ်စာရင်းပေးလာတဲ့ လူနာတွေ၊ ဆရာဝန်တွေနဲ့လည်း ကျနော်တို့က ဆက်စပ်မှုပေးပြီး အကူအညီတွေ လက်ဆင့်ကမ်းလို့ရမယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်”
ဟု လုပ်အားပေးတာဝန်ခံတဦးက သဘောထားကို ပြောပြသည်။
နံနက် ၉ နာရီမှ စတင်ပြီး ဆေးကုသမှုဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ညနေ ၆ နာရီတွင် အားလုံး အောင်မြင်စွာ ကုသမှုပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်နှင့် သွားဆရာဝန်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများက လာမည့်မေလတွင် ဆန်ဟိုးဇေးမြို့၊ မြို့တော်ပြခန်းဆောင်တွင် အခမဲ့သွားကျန်းမာရေးကုသမှုကို ဒေသခံအားလုံးသို့ စေတနာဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်ပေးမည့် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာဆရာဝန်များလည်း သွားရောက် လုပ်အားပေးကြမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာမိသားစုများလည်း သွားရောက် ကုသမှုခံယူနိုင်ကြောင်း၊ အဆိုပါသတင်းကို ဆက်လက်ပြီး ထုတ်ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(ဓာတ်ပုံ – SFBC – health drive, free dental checkup မြင်ကွင်း)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ဓာတ်ပုံသတင်း, သတင်းဆောင်းပါး	One Response to SF Burmese Community Organizers & Friends – အခမဲ့ သွားနဲ့ ခံတွင်းကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေး koko on February 26, 2013 at 10:03 am it was very thought full and good news. sayar Dr MAUNGMAUNG THAW and Dr HLA MYAING all member of dental family group did great job for the community. those care receivers are very lucky because i myself have teeth problems cant effort to meet dentist. kaung gyo loyar sanda pyae wa kya parsay. may you be healthy, may you be wealthy, be happy. sadhu sadhu sadhu.
ဗိုလ်ထက်မင်း - ကိုးကန့် MNDAA စခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း(၄)	ဗိုလ်ထက်မင်း - ကိုးကန့် MNDAA စခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း(၃)	ဗိုလ်ထက်မင်း - ကိုးကန့် MNDAAစခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း(၂)	ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်) - အောင်မြင်စွာ လုနိုင်လိုက်တဲ့ မေမေ့အသက်	ကာတွန်း ဂျော်ဒီး - လူထု မနာမယ့် နည်း ဆိုပဲ	အောင် ဝေး -ဒေါ်အောင် ဆ န်းစု ကြ ည် သို့ေ ချ ပ ချ က် (၃၊ နိဂုံး)	ငြိမ်းချမ်းအေး - စစ်ပွဲတွေရပ်ပါ	မောင်စွမ်းရည် - ၂၀၁၅ မတ်လထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း မီးရှို့ကြစို့	ဗိုလ်ထက်မင်း - ကိုးကန့် MNDAA စခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း(၁)	ထူးထူး (တောင်ငူ) - မေမေ မငိုနဲ့တော့နော်	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ နိုင်ငံတော်ငွေကြေးအလွဲသုံးမှု
ရွှေည၀ါဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟ တရားပွဲ။ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ဆန်းဒေး၊ ဖရီးမောင့် Ni Ni Mar - လေးသန်းကြီးနဲ့  စကားပြောခြင်း (၃)
SF Bay Area Burmese မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ စုံညီ အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ဖိတ်ကြားခြင်း MoeMaKa Online Store
စာပဒေသာ ကောက်စာများသီချင်းတပုဒ် ပြီးဆုံးချိန်
မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ …	မိုးမခမာတိကာစဉ်	About MoeMaKa (35)
Han Thit Naing (83)
Yan Naung (Bo Ta Htaung) (206)
ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ (152)
သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ (619)
လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ (216)
Cartoon Box (1,546)
Twitter: moemakaတင်မောင်အေး (ဘော်လီဘော) – ပါဝင်ဆင်နွှဲ ဘော်လီဘောပွဲ၊ ဆက်လက်ပျံဝဲ ဝေဟင်ထဲ http://t.co/dljXGqv2Sl http://t.co/Nkzje66u52 02:49:00 PM June 01, 2015 ReplyRetweetFavoriteစံလှကြီး – ကျောင်းဆရာများ၏ အောင်နိုင်သောစစ်ပွဲများနှင့် အလုပ်ကြမ်းသမား ဘုရင်ကြီး http://t.co/EaUUyOFVXt http://t.co/UA2mQPcvCj 12:33:45 PM June 01, 2015 ReplyRetweetFavoriteလှကျော်ဇော – ပါတီဝင်တယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ် (ပါတီစိန်ရတု အမှတ်တရ) http://t.co/PC2OCQMPnu http://t.co/svjDTH9RIf 12:24:21 PM June 01, 2015 ReplyRetweetFavoriteမှိုင်း (ဆေး – ၂) – ကျောထောက်နောက်ခံက ပြောပလောက်စရာမရှိဘူး http://t.co/eWw0APf4NG http://t.co/qAYcFeDpcO 12:19:23 PM June 01, 2015 ReplyRetweetFavoriteမောင်ရင်ငတေ – ရာဇဝင်ထဲကလူသားများ http://t.co/umQXZS37xh http://t.co/g6he7v3XUU 12:12:31 PM June 01, 2015 ReplyRetweetFavorite@moemaka Copyright © 2015 MoeMaKa Burmese News & Media. All Rights Reserved.
မိုးမခနဲ့ ပတ်သက်သမျှ ဦးခင်မောင်လတ် ဒေါ်ခင်မျိုးချစ် ရာပြည့်နဲ့ စာပေမိတ်ဆွေများ အမှတ်တရပွဲ အချိန်မီ မိုးမခ မေလထုတ် ထွက်ပြီ
By admin ဦးခင်မောင်လတ် ဒေါ်ခင်မျိုးချစ် ရာပြည့်နဲ့ စာပေမိတ်ဆွေများ အမှတ်တရပွဲ အချိန်မီ မိုးမခ မေလထုတ် ထွက်ပြီ...Read more » ရန်ကုန်ထုတ် မိုးမခလစဉ်မဂ္ဂဇင်း တွဲ၂၊ အမှတ်၎ ယနေ့ ထွက်ပြီ
By admin မိုးမခ ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၂ တကယ်ထွက်ဖြစ်မည်...Read more » Recent CommentsDr. Maung Maung Gyi on စံလှကြီး – ကျောင်းဆရာများ၏ အောင်နိုင်သောစစ်ပွဲများနှင့် အလုပ်ကြမ်းသမား ဘုရင်ကြီးTTS on အောင် ဝေး –ဒေါ်အောင် ဆ န်းစု ကြ ည် သို့ေ ချ ပ ချ က် (၃၊ နိဂုံး)Htwe on အောင် ဝေး –ဒေါ်အောင် ဆ န်းစု ကြ ည် သို့ေ ချ ပ ချ က် (၃၊ နိဂုံး)Khin Maung Saw on စံလှကြီး – ကျောင်းဆရာများ၏ အောင်နိုင်သောစစ်ပွဲများနှင့် အလုပ်ကြမ်းသမား ဘုရင်ကြီးThantzin on ဗိုလ်ထက်မင်း – ကိုးကန့် MNDAA စခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း(၁)သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ	မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ